Baaq oo uu soo saaray URURKA SOMALIDA PUNTLAND EE GERMALKA „USPG“ e.V.
Kala Xiriir Qoraalkaan
Ku: Isimada iyo Qolada Isku-haysata Xukunka
Ku: Dadka Reer Puntland Gudaha Iyo Dibaddaba
Qof kastow is weydii "maxaa dan u ah
Marka ugu horeysa walaalayaal, meel kasta aad joogtaanba. waad salaaman-tihiin. Annaga hadii aan nahay URURKA SOMALIDA PUNTLAND EE GERMALKA „USPG“ e.V. waxay nagu
reebta cabsi iyo walaac iska hor imaadyadda ka jira Puntland. Taas oo aan uga baqeyno in ay keento cawaaqi xumo iyo dagaal. Dad baa yiraahda „ Dagaal waa mid aad huri karto & mid aadan huri karin „. Annaga waxaan qabnaa, dagaal waa mid la huri karo, khaas ahaan midka sokeeye. Dagaal wiligii dhibaato laguma xalin, hadii uu fa’ido leeyahayna 11kii sano uu wadanka qalalaasaha iyo dilka ka socday ayaan mirihiisa guran lahayn.
Annaga waxaan ognahay in aay Ummadda Puntland ku nool tahay Ummad lagu yaqaano in ay xaliyaan dhibaata nooc kasta ah. Taas oo marqaati u ah in aay Putland ka mid ahayd degmooyinka ilaa hadda nabadda ku waara.
Sida aay wararka nagu soo gaarayaan iyo sida aan arrimaha ka taaganay Puntland u garanay waxaan iswaydiinay maxaa qasbay in aay Isimadda kala go’aan? Aaway dhaqankii iyo dastuurkii wax walba laga hormarin jiray? Maxaa dhaliyay shakiga ah in Isimadda aad moodid dad danahood u shaqeystayaal ah?
Waxaan dhamaan Isimada ka codsaneynaa:
In aad wanaagii iyo sharaftii la idinku yaqaanay ku soo laabataan amaba si wadaan.
In aad qaadaan tilaabooyin oo hannanka nabadda looga hirgalinayo Puntland iyo wixii la dan ah.
In aad furtaan wadahadalo „Lillaahi“ ah, kuna saabsan sidii wax looga qaban lahaa xaajada murugsan ee siyaasadeed ee soo foodsaartay gebi ahaan Puntland
In aad ka baxdaan fakrad „Reered“. Middaa waa midda dib noogu dhigtay.
In aad dhaqankaa iyo dastuurkaa wax walba ka hormarisaan. Taas oo kaliya ayaa nadab iyo horumar waara keeni kara. Ninkii labadaa qodob ka tilaabsada, danihii waddankana sidaa ku baabiya taariqda iloobi mayso.
Waxaan kaloo dhamaan Waxgaradka, Culimadda, Hooyooyinka iyo Dhallinyaradda idinka codsaneynaa:
In aad Danaha Soomaaliya iyo tan Puntland, idinka oo Ilaah la kaashanaya, si haboon u tixgelisaan.
In aad Midnimada Puntland iyo tan Soomaaliya wiligiin ilaalisaan
In aad horumarka Dhaqaalaha, Waxbarashadda, Caafimaadka iyo Bulshada ku dadaashaan
In aad Qalinka ka hormarisaan Khoriga oo aad wiligiin Dagaal iska hor istaagtaan.
In aadan Noqon dad lagu adeegsado
Waad mahadsantihiin kuligiin
URURKA SOMALIDA PUNTLAND EE GERMALKA „USPG“ e.V.